Gentoo ntinye nkuzi site na Live CD ọ bụla | Site na Linux
Mmmmmmmmmmm | | Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ndewo m Mmmmmmmmmmm, nke a bụ nke abụọ m onyinye, na oge a ka m na-ewetara gị nwụnye Tutorial of Gentoo
Nke mbu, achoro m ikwuputa na ihe nile ichoro di na Gentoo Wiki, ma ọ bụ na Ogba WikiAjuju metụtara nwụnye nọ na akwụkwọ ntụaka Gentoo. M na-eme nkuzi a n’ihi na ọtụtụ ndị ajụọla m, yana maka na m ga-etinye granite m n’ịhazi mgbe ị wụnye Gentoo.
Mara nke ahụ ndị na-agụ na-enwe ekele dị ukwuu na nke a. Ee, ọ bụ distro ebe enwere ike idozi ọtụtụ nsogbu site n'ịgụ wiki na ime nyocha (yabụ, ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ ha zaa "lelee wiki ahụ", ọ pụtara na dịka onye ọrụ Gentoo ị bụ nke a apụtaghị na enweghị azịza obi abụọ
"Dị Mfe", mana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ na-egosi na ị gụrụ iji dozie nsogbu gị.
Ugbu a, m ga-ekwu okwu banyere ihe Gentoo bụ, ihe dị egwu banyere ya, na ihe na - eme ka ọ dị iche na Linux distros ndị ọzọ. Anyị ga-amalite site na ndabere na Gentoo bụ koodu iyi nke dabere na distro, Kedu ihe nke a pụtara? , nke na-adịghị ka ot (precompiled) distros dị ka Debian, Ubuntu, Arch, Manjaro, Fedora, EBU, na ogologo ogologo wdg; Mgbe ị na-etinye ngwugwu, ọ naghị ebudata ihe a ga-eme (ọnụọgụ abụọ, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, wdg) wee wụnye ya, kama ọ na-ebudata koodu isi ya, na-achịkọta ya dịka onye nhazi anyị na iwu. anyị akọwapụtawo maka nchịkọta, ma site na nke a ọ na-ewepụta ihe a ga-eme, nke ọ na-etinyezi.
Nke a bụ ebe ọdịiche dị, na ihe na-eme ka ọgba aghara a pụọ ​​iche, ọ bụghị naanị na ọ na-achịkọta ngwugwu, kamakwa na mmadụ kpebiri ịkwado ihe atụmatụ ngwugwu ọ bụla ga-enwe. Nsonaazụ ziri ezi nke nhazi na mkpokọta nke nchịkọta bụ ọsọ. N'ihi gịnị? Ka anyị jiri ihe atụ gosi ya:
Ka X bụrụ distro precompiled (ndị ahụ m kwuru na mbụ), ka e wee nwee ike itinye X distro na ụdị igwe dị iche iche, ọ dị mkpa na a ga-agbakọta ngwugwu ya na usoro ntuziaka nke igwe okenye. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ha si na Pentium II gaa n'ihu, anyị ga-achịkọta ngwugwu ha niile na usoro Pentium II.
Olee nsogbu nke a na-eweta? Kedu na ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ, were ya na i7, nchịkọta ndị ahụ agaghị erite uru nke ikike niile nke ikpeazụ na-enyeEbe ọ bụ na ọ bụrụ na ha jikọtara na ntuziaka ntuziaka nke i7, ha agaghị enwe ike igbu ha na ndị nhazi tupu nke a, n'ihi na ndị nke ikpeazụ enweghị ntuziaka ndị ọhụrụ ahụ.
Gentoo, site na nbudata koodu isi ma kpokọta ya maka nhazi gị, ga-eji ikike ya zuru oke, ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na i7, ọ ga-eji usoro ntụziaka nke ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na Pentium II, ọ ga-eji ndị kwekọrọ na nke abụọ.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịhazi ụdị nkwado ịchọrọ ka nchịkọta ga-enwe. M na-eji KDE y Qt, m enweghị mmasị na nchịkọta nwere nkwado maka GNOME y GTK, ya mere a sị m gị chịkọta ha n’enweghị nkwado nye ha. N'ụzọ nke a, mgbe ị na-atụle otu ngwugwu na Gentoo na distro X, ngwugwu Gentoo na-adị mfe karị. Ma ebe ọ bụ na distro X nchịkọta ndị ahụ bụ ihe ọmụmụ, ha ga-enwe nkwado maka ihe niile.
Ugbu a, mgbe ịmebata okwu, ana m ahapụrụ gị njikọ nke faịlụ nhazi m nke soro ntuziaka na PDF kedụ ihe m mere esi wụnye Gentoo site na Linux Live CD ọ bụla (Ubuntu, Fedora, EBU, Azụ, Slax, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abata n'uche) ma ọ bụ nkebi nke ha tinye Linux distro.
Njikọ faịlụ faịlụ m
Njikọ na Ntuziaka PDF
Maka onye kachasị nzuzu banyere arụmọrụ, n'otu nduzi ahụ ka m hapụrụ gị ụfọdụ ndụmọdụ iji nweta arụmọrụ nke ihe ruru 30% dị elu karịa iji arụ ọrụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Gentoo echichi nkuzi ọ bụla Live CD
Ihe 59 kwuru, hapụ nke gị
Haha na m malitere ileba anya na akwukwo a iji tinye gentoo.
Daalụ maka tuto.
Ọmarịcha, ekele maka ntuziaka.
Ekwuru m mgbe niile na egwu nke ọtụtụ ndị ọrụ maka ọgba aghara a enweghị isi ma ọ bụ na ọ bụ naanị umengwụ.
Gentoo Linux bụ ezigbo ịhụnanya mbụ m, n'oge ahụ mgbe m nwere onye nhazi ihe eserese, ha bụ oge dị mma.
Ekwesiri ighota (n'agbalighi iwelata oru gi), na enwere ntuziaka ntinye maka ndi choro ka Gentoo Linux na komputa ha nzoputa oge, nke a sitere na Live DVD weputara maka ncheta nke distro (na-eme ka o doo anya na ga-etinye gburugburu desktọọpụ, Gnome, KDE, XFCE, wdg).
Ostentatious onyinye nke abụọ, ị cheghị? Enwere m mmasị na onyinye nke uru dị elu dị ka ndị a. Cheedị ma ọ bụrụ na itinye ndu ahụ na post hahaha. Ezigbo enyi, nọgidenụ na-ede. Ruo oge nkuzi ọzọ ... Amaghị m, Crux ma eleghị anya?
hahaha daalụ, enwere ike xD hahaha
«(…) Anyị ga - agbakọta ngwugwu gị niile na usoro iwu Pentium II (…)»
Nke ahụ abụghị eziokwu ma ọlị. Mgbe ị chịkọtara ngwugwu ị nwere ike ikpebi ma ihe kacha nta nhazi nke usoro ihe a chịkọtara ga-arụ ọrụ yana maka usoro nhazi nke ịchọrọ ịkwalite mkpokọta. N'ọnọdụ ọ bụla, enwerekarị ọnụọgụ nhọrọ nke na-ewepụta koodu ọnụọgụ kachasị maka ọtụtụ ndị nhazi. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ntụle na-atụle ihe dị iche na arụmọrụ n'etiti Gentoo na ndị ọzọ, ọ bụghịkwa ihe dị ịtụnanya dịka ị na-atụ aro. Nwere ike ịhụ otu n'ime ha ebe a (http://socios.linuca.org/zub/zubmark-20031230.html),, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na n'ezie ọ dịghị onye nwere ike iwere dị ka eziokwu zuru oke, ọ dị mkpa mgbe niile ịmụ ihe n'ụzọ zuru ezu ihe a na-enyocha na otu esi eme ya.
O doro anya na nzube nke ikwu bụ naanị dokwuo anya, ebe ọ bụ na nbanye gị na-egosi ajụjụ ndị na-ezighi ezi. Ma eleghị anya, ọ bụ gị (echere m) agụụ maka Gentoo, ọ na-eme m mgbe ụfọdụ mgbe m buliri omume ọma nke Debian, onye maara.
Ka o sina dị, ekele, na ịga n'ihu ịgbasa nnwere onwe!
Zaghachi ka ị kwusi
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, emere m nkọwa ahụ na-eche na ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ “desktọọpụ” ị ga-achọ inweta ọtụtụ ihe na ngwaike gị ka ị soro soro maka ihe nhazi gị. Aghọtara m na ihe m na-ekwu dị ka a ga - asị na ọ dị ọsọ ọsọ, na PDF m na - enye ndụmọdụ iji hazie sistemu arụmọrụ dị elu nke m na - arụ ọrụ na teknụzụ a na - akpọ graphite na n'okwu dị nkenke ihe ọ na - eme na - ebuli usoro okirikiri nke " maka "ụdị na" ebe "enwere ndị ọrụ na-eji akụkọ a ruo 30% arụmọrụ ọzọ, enwere m ya arụnyere na iji ọkọlọtọ yana -O3 kachasị njikarịcha kachasị mma, n'echiche m, ma jiri ya tụnyere kubuntu, nke dịkwa nwa oge na igwe a, Gentoo, ya na ntọlite ​​ahụ, na-agba ọsọ nke ukwuu. Aghọghị m n'eziokwu etu eserese na-arụ ọrụ, o doro anya na ihe ọ na-eme bụ ịmepụta ọtụtụ "eri" maka ogbugbu nke ihe maka nke, n'ụzọ dị otú a, na usoro nke igbu oge, ọ ga-enweta usoro 1 (ebe ọ bụ na ọ ga-enwe eri na nke ọ bụla iteration nke) jiri ya tụnyere usoro n nke nkịtị maka, nke a bụ ihe m ghọtara xD, otu ihe ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ya doro anya na nke a, m ga-achọ ka ị kọwaara m ihe ọ na-eme kpomkwem 😀
Agggghhhhhh comp m kpọrọ asị na mbadamba ahụ na-agbazi m, ị ga-achịkọta
Ọfọn, ọ bụrụ na anyị atụnyere onwe anyị na Kubuntu ... xD
Kubuntu adịghị njọ, ọ masịrị m n'ezie: D, ọkachasị mgbe Canonical kwụsịrị ịkwado ya na ndị obodo na-ejigide ya, ọ na-eme nke ọma. Otu ụbọchị, wasnọ nkịtị gwụ m ike na m na-ese onwe m na-egwu bit na kubuntu:
12.10-bit Kubuntu 32 na buut, na-emetụghị ihe ọ bụla ma ọlị
Kubuntu malite mgbe emechara m ụfọdụ mgbanwe (dọpụta ọtụtụ ọrụ wdg wdg wdg na ala. N'okpuru nepomuk gbanwere windo njikwa m tinye windo wdg)
Na nke a, echefuru m igbu usoro VMWare, nke na-erepịakwa 50mb, yabụ ọ ga-ewepụ 50, Kubuntu tụgharịrị na 10hs
Ihe ndị a niile ejiri na plasma rụọ ọrụ, ọ bụrụ na achọrọ m iwepụta ya ma setịpụ ihe atụ BE: Shell, m ga-egbu usoro plasma-desktọọpụ
Kubuntu masịrị m n'ihi na oke njọ 9.04 na 9.10 dị, amalitere m ịchụgharị ọgba aghara nke na-agba KDE nke ọma na ọ bụ etu m si mata Arch 😀
Mgbe m bidoro iji Arch ma chọpụta mma nke injinịa ya yana ụkpụrụ ntọala m maara na ọ bụ na / ụlọ, ụtọ / ụlọ.
M na-ajụ gị ajụjụ gbasara njide: ọ bụ ebe dị elu bụ ngalaba KDE omenala? Ọ bụrụ otu ahụ, olee ụdị nke ị na-eji na ya ma kedụ otu akụkụ pịnịstị ahụ hà? Chekwa agba bụ ihe kacha nso m hụrụ MacOS iji KDE.
Banyere nha nke ogwe ndị dị na KDE, ọ dị ka ihe ịtụnanya na ha abanyebeghị oghere OpenSUSE nke na-akpaghị aka na-agwa gị otu nnukwu panel ahụ dị mgbe ị na-eme ka ọ buru ibu ma ọ bụ pere mpe, na-emejọ F / LOSS !!! xDD
Msx ihe mgbochi ahụ ọ dị? : Ma ọ bụ na m swearụrụ gị iyi na m na-achọ ya ebe niile, ị nwere njikọ? M ga-enye ya ọgụ iji hụ ma m nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ na Gentoo haha, ngalaba ahụ bụ isi mmalite, dịka ị ga-ahụ ugbu a si m iPad ma anaghị m Ọ dị mma, otu ihe ahụ bụ xD dị elu, font ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi bụ sans serif, otu n'ime ndị na-esite na ndabara, ihe nzuzo iji mee ka mkpụrụ akwụkwọ mara mma nke ọma bụ iji rụọ ọrụ nhọrọ niile ederede, tinye ya "zuru" smoothing, na na na dpi, m nwere ha na 120, na nweta na N'ihi 😀
«Msx nkedo ahụ dị? : Ma ọ bụ m swearụọ iyi na m na-achọ ya ebe niile, ị nwere njikọ? A ga m enye ya ọgụ iji hụ ma m ga - eme ka ọ rụọ ọrụ na Gentoo haha, »
Enweghị m ike ịchọta ibe maka ya ugbu a, mgbe m nwere ya aka m ga-enye gị ya
Mgbe m hapụrụ gị otu n'ime ọtụtụ njikọ ndị a tụlere patch ahụ ekwuru ma ọ bụ enwere ike ịgbanwe oke ogwe site na iji ọnụọgụ kama ojimeta> :(
«Iji mee ka mkpụrụ akwụkwọ mara mma nke ọma bụ ịgbalite nhọrọ niile ederede ederede, tinye njupụta“ zuru ”, ma kpọọ dpi, enwere m ha na 120,»
Hmm, enweghị m ike ịkọwara gị ihe m kpọrọ asị banyere akwụkwọ edemede, n'ezie ọ bụ ihe mbụ m na-gbanyụ mgbe niile wee debe ihe ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkara mgbe onye dere ya nyere ya (ọ bụghị ikpe na KWIN).
Mgbe m nwere oge, m ga - ahụ ma ọ bụrụ na m hapụ ya dị ka nke gị, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ngbanwe ole na ole m mere na kọlụm m (24px, ụfọdụ plasmoids, wdg) enwere m ezigbo ntụsara ahụ ebe ọ bụ na m na - ebi ngwa ndị ahụ na - amalite. si yakuake 😛
M ka gụchara benchmarks ahụ, m kwughachiri ya nwere ike ịbụ na ezigbo ederede m na Gentoo mebiri ederede m, mana na Benchmark emeela agadi ._. Gentoo 1.4 (ha adịworị na mbipụta 12) yana GCC enweela ọtụtụ ihe na esemokwu nke ndị na-arụ ọrụ multicore, agbanyeghị ahụmịhe m bụ ihe ndị a mgbe ị wụnye ya -O3 ma ọ bụ ọbụlagodi -O2 uto n'ọnụ gị nke hapụrụ gị, ọ dịka na-ekwu na benchmark: "N'ozuzu ọ dị ka Gentoo na-achịkwa iji rụchaa ọtụtụ ọrụ ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere Debian na preembpiled binaries ya." Ugbu a, mgbe m tinyere grafit na ya, achọpụtara m n'onwe m, na a ghọtara na ọ na-emecha ngwa ngwa. 😀
Ezigbo x11tete11x ma ọ bụrụ na ịmara maka ọkwa a, m na-eche obere oge xD. N'oge a ana m etinye X na Gentoo, ị gbara m ume ka m gbalịa ọzọ kama Funtoo bụ nke m na-etinye n'oge na-adịbeghị anya. Ruo ugbu a ihe niile na-aga nke ọma, ntọala ị tinyere na mado ahụ ejeela m ozi nke ọma. naanị nsogbu m nwere bụ mmelite zuru ezu nke sistemụ, kedu mgbe ọ ka mma ime ya. Oge a ka m mere ya mgbe m bidoghachiri ebe m nwere ebe ọrụ ma wee nwee mmelite m tupu m wụnye mmemme ọzọ. M na-amalite ibudata njikọ ndị a, nnukwu blog enwere m obi iru ala ebe a xD.
PS: Naanị ịmekọtara ihe nkesa xorg na enweghị njehie, nwee obi ụtọ na ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị gụọ nke ọma. Ma Blaire Pascal Crux abụghị echiche ọjọọ, ndị a distros bụ ebe ị na-amụta ihe n'ezie. Banyere.
Ndo, i jirila freebsd ma ọ bụ ihe bsd rụpụtara?
Ee, e jiri ya tụnyere gentoo, olee ọdịiche dị na ya? ma ọ bụ uru.
Ekele m, agụla m pdf 😀 a dị ukwuu.
Dara ogbenye karịa FreeBSD Enwere m ọtụtụ nsogbu ọkwọ ụgbọ ala, yana dịka ọmụmaatụ igwe nju oyi nke igwe ahụ wee bụrụ onye nzuzu, n'aka nke ọzọ ọ na-eme m obere oge, yana otu kernel Linux si aga n'ihu, o nwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ. , nke ahụ kpatara m ji họrọ Gentoo 😀
Ee, n'eziokwu m na-eme nnyocha na gentoo na freebsd (ọ bụ naanị m na - eme ka ọ dị oke ọnụ).
Ma gnu / Linux m na-ahụ ya nke akwadoro maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọnọdụ niile. Karịa ihe ọ bụla na ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ.
Tinyekwara gentoo na mbadamba nkume gị? 😀
«Maka m naanị onye na-eme ka ihu ya» ROFL !!!
Hahahaha, Gentoo na iPad, ikekwe na openiboot mana ị ga-achịkọta koodu isi ya, ozugbo ịwụnye ubuntu, mana gentoo ga-abụ ihe ọchị 😉
Haha mba mba, iPad a nwere m ezigbo ihe ọjọọ, abụ m nnukwu dọkịta na-awa xD, enwere m mmasị itinye aka m ma kwado ihe niile m nwere ike, yana na iPad agbatị m aka na ụkwụ, sistemụ ahụ dị mma, mana ọ bụ naanị na, odighi ihe obula nwere ike ime uu
Che, ụbọchị ole na ole gara aga otu enyi gosiri m obere Galaxy Note (echere m na ọ bụ 7 ″), nke bụ gimmick, na ihe mbụ m mere bụ ịga na menu wee hụ ụdị nke gam akporo ọ gbara (4.04). Akpụkpọ ahụ mere WTF ihu !!! wee juo m ihe merenụ na ọ hụghị xD ahụ
Echere m na anyị na-ewere oke mfe, dị ka ihe okike, ọnọdụ anyị nke sayensị kọmputa na o doro anya na ọ bụghị ihe jupụta n'etiti ọha na eze maka onye ọ bụrụ na ihe adịghị ahụ ya adịghị adị; n'ime nke a, iOS na Metro dabara n'ụzọ zuru oke - dịka gam akporo maka anyị !!!
Nkwalite mara mma nye Gentoo maka ndị na-amaghị.
Naanị nkọwa: Arch Linux nwekwara ike ikpokọta kpamkpam site na isi mmalite ma gaa n'ihu na-eji ya n'ụzọ ahụ, ya bụ, dị ka isi iyi nke sitere na distro ebe nchịkọta niile nke sistemụ ahụ nwere PKGBUILD kwekọrọ (dịka EBUILDs) nwere ike ịnweta na a dị mfe site na ABS, Arch Build System.
Enwetụbeghị m ihe ọ bụla n'ụzọ a ma amaghị m otu ọ ga-esi dị mma iji dozie ya, mana na usoro ọrụ igwe dị mfe: budata PKGBUILD nke ngwugwu iji kpokọta, dezie akụkụ ya na ihe ọ ga-achịkọta (nke yiri ya) iji ọkọlọtọ), chịkọta ma wụnye ma ọ bụ chịkọta ma kwadebe ma ọ bụrụ na ọ bụ ndabere na ngwugwu ọzọ.
Banyere iwepu nkwado GNOME site na ngwa KDE na ntụgharị aka, echeghị m na ọ bara uru, ebe ọ bụ na a na-eme ọtụtụ ngwa dị mkpa na usoro abụọ ahụ.
Ee, mana Archlinux ABS anaghị achịkọta ndị na-atụkwasị obi na akpaghị aka, na enweghị njikwa dị mfe na nke ikpeazụ ma ọ bụ ọkọlọtọ nchịkọta ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’itinye mgbakwunye, ọdịghị onye na - ekwe nkwa na ọ dị na nchekwa, ma ọ bụ na ụdị ya bụ nke dabara adaba. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmetụta zuru ụwa ọnụ, ị ga-ezipụta na ịdabere na PKGBUILD niile iji wụnye. Enweghikwa nnabata izizi na usoro nchikota nke ndi dabere. Nsogbu ọzọ bụ na nhọrọ ndị a kpọtụrụ aha na-aga na PKGBUILD ma ọ bụghị na faịlụ ọnụọgụ, nke na-eme ka usoro mmelite ahụ sikwuo ike.
Ike nke Gentoo dị na nhọrọ ịhọrọ, ma ọ bụ n'ụwa niile (maka ngwugwu niile), ma ọ bụ akọwapụtara (maka otu ma ọ bụ ọtụtụ nchịkọta), nke nhọrọ nchịkọta na ntụkwasị obi na-eji wuo tarball ọ bụla (ndị na-agbanwe agbanwe USE zuru ụwa ọnụ) na mpaghara), iji nọgide na-achịkwa njikwa nke arụnyere. Portage na-enyocha na akpaghị aka na maka ngwugwu ọ bụla emepụtara, a chịkọtara ndị tụkwasịrị obi, ma ọ bụ nwee nhazi, yana nhọrọ ndị dị mkpa iji mejupụta ntụkwasị obi ndị na-adịghị mma. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na otu mgbanwe agbanwee na ojiji zuru ụwa ọnụ, ma ọ bụ nke mpaghara, eserese nwere ike ịhọrọ ma chịkọta ihe niile dị mkpa maka mgbanwe ndị a ga-egosipụta. Ọzọkwa, Portage nwere ike wepu ngwugwu na-adịkwaghị mkpa: iputa –depclean.
N'aka nke ọzọ, Gentoo na-enye ngwaọrụ iji nyochaa na njikọ dị ike na-agbanwe agbanwe, ma dozie ndị gbajiri agbaji, nsogbu a na-apụghị izere ezere ma ọ bụrụ na imelite sistemụ gị site na isi mmalite. N'otu aka ahụ, enwere ngwá ọrụ (wdg-melite) iji mee ka faịlụ nhazi ahụ dị na nke emelitere: Enwere m ike ịmekọrịta akpaka ma ọ bụ aka aka, tụfuo faịlụ ọhụrụ ahụ, ma ọ bụ debe nke ikpeazụ.
Ọ dịkwa mma ịsị na maka ngwugwu ọ bụla Gentoo na-enye gị ohere ịhọrọ n'etiti ọtụtụ nsụgharị kwụsiri ike, na ule, na nkpuchi siri ike; na ekele na ohere mpere ọ ga-ekwe omume ịwụnye ihe karịrị otu nsụgharị n'otu oge. Ihe a niile dị mkpa iji gosipụta ezigbo ntụkwasị obi. Dịka ọmụmaatụ naanị na dev-libs / nss enwere m ihe ndị a niile:
3.12.11-r1, ~ 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, ~ 3.13.5-r1, 3.13.6, 3.14 na ~ 3.14.1
Ebe ndi n’enweghi ~ kwusi.
Nchịkọta ọdụ ụgbọ mmiri nke Gentoo bụ ihe nchịkọta nchịkọta 16000 (nke nwere ọtụtụ nsụgharị nke ọ bụla), ebe ihe atụ Debian anụ, amaara maka nnukwu nchịkọta sọftụwia, na-enye ihe gbasara 29000 ọnụọgụ site na ngwugwu 14000. Ma ọ bụrụ na nchịkọta ezughị, enwere overlays ndị mmepe, na ndị obodo wuru, ndị na-agbakwunye sọftụwia.
@ xe_nweke, @Juan
You nwara Funtoo?
Anwaghị m Funtoo. Mana ọ bụ ihe m nwere n'ime ya ebe ọ bụ na ọ na-enye ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ, dịka iji git kama rsync iji mekọrịta ebuilds (nke m chere na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma), ụzọ ọzọ (ma eleghị anya ngwa ngwa) iji chịkọta ngwa ọrụ ahụ , na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ nwere ike ịba uru.
Site n'ụzọ, naanị ugbu a ka m ghọtara na m na-etinye Juan dị ka Nick (ugbu a, m debere ya maka agbanwe agbanwe), ebe ọ bụ na m na-eji Ankh ma ọ bụ Rubiño eme ihe mgbe niile. Enwere m mgbagwoju anya na onye ọrụ facebook na m ga-abanye saịtị ndị ahụ na-arịọ gị maka akaụntụ na netwọkụ mmekọrịta iji kwuo.
Mụ na Funtoo na-egwuri egwu ntakịrị, enweghị m ike ịkwụsị ịme ya (n'oge ahụ amaghị m ihe ọ bụla gbasara Gentoo ma ọ bụ otu esi eji edozi USE) n'ihi na enwere m nsogbu na iji ọkọlọtọ ebe Funtoo enweghị "profaịlụ" emelitere ya Emechara m kwụsị ịhọrọ vetiran soja Gentoo, ugbu a m lere ya anya, ihe mere m bụ ihe dị mfe, ọ bụ okwu ịgbakwunye ihe ole na ole iji mee xD
Amaara m ihe dị ka afọ 2 Arch, ABS ka ị na-egosi na ọ dị mma iji chịkọta, ngwugwu 1, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, mee ya dịka na Gentoo, anyị ga-eji aka mee ya maka ngwugwu ọ bụla na ịdabere na nke ọ bụla, o nweghị isi nke ntụnyere na Portage , nke na-agbanwe ihe niile, enwere mmemme nke gbalịrị iulateomi ihe ngosi, nke a na-akpọ pacbuilder, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mma, ọ bụrụ na m ghọtara okwu gị, agbanyeghị, ha na-akọwa onwe ha dị ka Distro precompiled
Achọrọ m ịgbakwunye: Njikwa ngwugwu ndabara Arch bụ pacman, nke a na-edozi nke ọma na ọnụọgụ abụọ. Mana o, nkọwa a ziri ezi
Eeh, kpom kwem, okwu gi na nke Juan bu uzo 100%
Ajuju. You na-eji ngwa gtk? Ọ bụrụ otu a, gịnị bụ ọkọlọtọ -gtk?
N'okpuru Percaff m na-akọwa ya n'ụzọ zuru oke, enwere nchịkọta nke m na-arụ ọrụ gtk, na mmemme nke ọzọ nke na-eji ihe eme ihe, dịka ọmụmaatụ gtk, na ụfọdụ ọ na-agbakọta ha ileghara -gtk anya, dị ka ọ dị na nvidia-ntọala, nke a ee ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ gtk ka ọ rụọ ọrụ 🙂
Gentoo bụ otu n'ime nkesa ndị a kacha akwanyere ùgwù na site na ọtụtụ ndị kachasị mma, mana n'usoro enwere nnukwu nkọwahie banyere nkesa a na-eme ka ọtụtụ mmadụ họrọ ịghara ịwụnye ya, ekele maka onyinye ndị a ha na-eme ka Gentoo bịaruo ndị mmadụ nso.
Nanị ihe m na-eche bụ na Gentoo nwere ọtụtụ nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị ATI. ọ ga-abụ eziokwu ka ọ gha ụgha?
Ast bastard, ugbu a ị kụdara m aka itinye Gentoo.
Ọfọn a gentoo ma ọ bụ freebsd.
AMD bụ onye na - eme ihe na - ezighi ezi ebe ọ bụ na ATi nweburu ihe ọjọọ na distro ọ bụla ma ọ bụ ihe siri ike ịme ka ha rụọ ọrụ nke ọma na-enweghị isi na X: p
+1, AMD bụ onye na-enye Linux nsogbu, yana nkesa niile n’izugbe, ọ bụghị naanị Gentoo.
Ma ha azabeghị nchegbu m, ọ bụ eziokwu na AMD enweghị ikike nke anyị niile na-atụ anya ya, enwere nkesa na-ekwekọghị na AMD dịka Sabayon, ndị ọzọ nwere obere ndidi, kedu ndị otu Gentoo hụrụ?
Chere, ebudatara m sabayon iso na m ga-anwale ya.
Okwu gị na-atọ m ụtọ.
Radeon HD 6870 rụrụ ọrụ nke ọma maka m, mana maka nke a, a ga-etinyerịrị ụfọdụ nhazi na kernel, yabụ ọ na-ewekwu ọrụ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala anaghị akwụ ụgwọ yana ndị ọkwọ ụgbọala nwere ihe ngosi AMD karịa Nvidia.
Magburu onwe 😀
Well with sabayon live dvd m ga etinye nwene na x11tete11x nkuzi ma si otua kpochapu nro a nke anakpo debian.
Enweghị mmejọ na ndị Debian. Mana maka m ọ bụ isi ọwụwa ma ghara iwekọta nke ọma kde.
Diazepan ọkọlọtọ ndị ekwuputara na faịlụ make.conf metụtara usoro niile. x11tete11x setịpụrụ ọkọlọtọ gtk naanị maka ụfọdụ ngwa ngwa ọ bụghị maka usoro niile. Do na-eme nke a site na idezi faịlụ /etc/portage/package.use. Ọ bụrụ na m mehiere, enwere m olileanya na x11tete11x ga-eme ka anyị nwee obi abụọ.
azịza gị zuru oke 😀
Mourinho na-aga ugbu a dijo
Ọmarịcha ntinye, enwere m mmasị n'ụdị ntinye a n'ihi na ụzọ ahụ ndị mmadụ nwere ike isi chọpụta gentoo, distro «maka ụmụ nwoke macho».
Zaghachi Mourinho na-aga ugbu a
Ntinye "ọdịnala" nke gentoo, njikwa dị ọcha, nwere ike imenye ụfọdụ ụjọ, ebe ọ bụ aka, na-ahapụ pc na-arụsi ọrụ ike ọtụtụ awa na-agbakọta. Iji belata ohere nke njehie (na inwe ike ime ihe ndị ọzọ na pc), na-etinye mgbe niile, m na-eji pendrive si SistemRecue CD, nke bụrịrị gentoo dị ndụ, nke na-enye ohere nrụnye na enweghị nsogbu na ịkọgharị ma ọ bụ ịhọrọ enyo ( Ana m eme na ubuntu dị ndụ), na -e copomi ma na-edegharị iwu site na akwụkwọ ntuziaka na-enweghị nsogbu. Have ga-eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị ga-eji gentoo nke ọma, mgbe ị na-achịkọta kernel hụ na ọ dakọtara na xorg ... yabụ ị ga-agụ akwụkwọ ntuziaka na xorg ka ị ghara ịkọgharị ugboro abụọ. Alsokwesịrị iji aka gị dee xorg.conf na mkpebi ndị ahụ, ma ọ daa. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na enwere mperi mbido, ị nwere ike ịbanyeghachi na cd dị ndụ ma nyochaa ihe niile, ị gaghị akwụsị inwe ndidi, na-eme ihe niile ọzọ, dịka o si mee m 😛
Ndi mmadu, a nzuzu ajuju, enwere ike idezi ya? n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-agwa m okwu banyere okwu dị iche iche, dị ka otu esi arụ ọrụ kaadị vidiyo nke Intel (nke kwesịrị imetụ aka na ndị ọzọ n'ihi na opekata mpe otu onye nwere ihe m tinyere ebe ahụ (nke fọrọ nke nta ka ihe wiki na-ekwu) ), ọ naghị arụ ọrụ maka ya), emesịa m ga - achọ ịme nyocha na-agbakwunye ngwọta ndị ahụ niile na njikọ ndị akọwapụtara nke ọma iji dozie nsogbu ndị ahụ, ị ​​nwere ike?
You ga-etinye pdf ọzọ?
Echiche a ga - agbakwunye ihe na PDF ma bulite nsụgharị ọhụrụ (echiche nke onwe m bụ imelite ntuziaka a yana ndụmọdụ na azịza maka ọnọdụ dị ka kaadị vidiyo, wdg) (naanị m nwere ike ikwu maka nvidia na KDE, nke bụ ihe m ji 🙂) yabụ ọ bụrụ na ị gwa m otu ụlọ ọrụ ị nwere yana otu ị siri dozie ya, ọ ga-amasị m ịtinye ya (otu ị si dozie ya ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla)
Ugbu a, m wụnye gentoo, m na-eji ati radeon 6450, m ga-agwa gị otu o siri gaa.
Ana m ejikwa wifi network dịka wired.
Ee ị nwere ike, mgbe ị bugoro ya, kpọtụrụ m ma ọ bụ otu n'ime ndị admins ahụ, anyị ga-agbakwunye ya na post. 🙂
Zuru oke! Daalụ 😀
Mma, m hụrụ a otutu chinchi a wụnye usoro 😀
Gbalịa sabayon 64 bit ndụ.
M na-eziga njehie mgbe m na-achịkọta, n'ihi na m gbalịrị ịwụnye kernel na bits 32 ma budata ọkwa ahụ na 32.
Mgbe m na-eji mpaghara anọ, m na-eziga njehie es.ES-UTF-8 mgbe m jiri es.MX-UTF-8.
Mana hey, aga m etinye echi site na gọọmentị gentoo live cd.
Ugbu a ka m hụrụ, sabayon na-etinye 50 gbs. Chaị.
ị ga-arụkọ ọrụ Live CD nke otu ụdị ụlọ ahụ, na ihe dị na mpaghara-gen dị ka njehie syntax n'ihi otu i si dee ya ebe ahụ,
i kwesiri ime:
chekwaa, wee mee mpaghara-gen
ọ bụrụ na enwere obi abụọ xD:
Mgbe ị hụrụ na KDE partitionmanager na Sabayon nwụnye bụ 51 bgs na gparted ọ bụ 21 gbs.
Ntị: Ndị na-aga ịwụnye KDE 4.9.5 nke nkuzi ahụ nke na-eme:
p = proj / kde.git; a = blob_plain; f = Akwụkwọ / package.keywords / kde-4.9.keywords »
wget anaghị ebudata faịlụ ahụ nke ọma, yabụ ị ga-eji aka gị tinye njikọ ahụ ma detuo ọdịnaya ya niile na faịlụ KDE-4.9.5.keywords, n'ime /etc/portage/package.keywords/
Mgbe e mesịrị, mgbe m bulite nyochagharị ọhụrụ nke PDF a, m ga-edozi nsogbu ndị a, m ga-agbakwunye «ChangeLog» ka ị wee mara na m gbanwere site na otu nsụgharị nke nkuzi gaa na ọzọ another
Ihe nkuzi a zuru oke maka m, Achọrọ m ịwụnye Gentoo echi na Fedora iso: B
F18 na-apụta ugbua O_o ??? You hụrụ ụzọ maka ụdị a? N'oge ụfọdụ F18 na-aga ịbụ mgbanwe.
Ekele m, usoro nke nkuzi ọ bụla ka bara uru ma ọ bụ enwere nkwanye ọ bụla m kwesịrị iburu n'uche, aga m etinye Gentoo ma ọ bụ oge mbụ m na distro a, enwere m olileanya ịnweta ya
Ekele m na ezigbo tuto
Eziokwu bu na esoghi m ya na akwukwo ozi ozo, akwukwo ndi mmadu ga-eburu gi na uzo kwesiri, agbasoro m nkuzi a rue mgbe ị na-eme chroot na i no n'ime sistemu gi, buru ihe m mere.conf dika ihe omuma, mba bufee anam na ọtụtụ ihe na USE agbanwe, m sooro ndị ọrụ gọọmentị Gentoo
Homerun: Unitydị n’otu na KDE
Potenza: Ọhụrụ, ọmarịcha akara ngosi mara mma maka Linux